လက်ထောက်ပါမောက္ခ စူထာန်မ် ယွန်းအိုင်ထာန်မ်
အိမ်စာမျက်နှာ / ကောဆောထောချောနှင့် ပတ်သက်သော / ကောဆောထောချောကော်မတီအဖွဲ့ / ประวัติประธานและกรรมการ กทช. (ปฏิบัติหน้าที่ กสทช.) ปี 2553-2554
ဥပဒေဘွဲ့ (ဂုဏ်ထူးဘွဲ့) ၊ ချူလာလွန်ခေါင် တက္ကသိုလ် (Chulalongkorn University)
LL.M., ဟားဗတ်ဒ် ဥပဒေကျောင်း
LL.M. အလွန်, နယူးယောက်ခ်တက္ကသိုလ်
အလုပ်အတွေ့အကြုံ (၁၉၉၉- ၂၀၀၄)
သိပ္ပံ၊ နည်းပညာ နှင့် စွမ်းအင်အတွက် တရားရေးရာစင်တာ၏ ဒါရိုက်တာ
တက္ကသိုလ်ဆရာများအတွက် လက်ထောက်တက္ကသိုလ်ဌာနမှူး ၊ ဥပဒေမဟာဌာန ၊ ချူလာလွန်ခေါင် တက္ကသိုလ် (Chulalongkorn University)
သုတေသနနှင့်သတင်းအချက်အလက်အတွက် လက်ထောက်တက္ကသိုလ်ဌာနမှူး ၊ ဥပဒေမဟာဌာန ၊ ချူလာလွန်ခေါင် တက္ကသိုလ် (Chulalongkorn University)
အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းအတွက် လက်ထောက်တက္ကသိုလ်ဌာနမှူး ၊ ဥပဒေမဟာဌာန ချူလာလွန်ခေါင် တက္ကသိုလ် (Chulalongkorn University)
လက်ထောက်ဒါရိုက်တာ/တက္ကသိုလ်ဆရာ ၊ ဥပဒေနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် သုတေသနပြုစင်တာ ၊ ဥပဒေဌာန ချူလာလွန်ခေါင် တက္ကသိုလ် (Chulalongkorn University)
ဝန်ထမ်းမဟာဌာန ၊ ဥပဒေ မဟာဌာန ၊ ချူလာလွန်ခေါင် တက္ကသိုလ် (Chulalongkorn University)
ဝန်ထမ်းမဟာဌာန ၊ ဥပဒေဘာသာရပ်၏ လက်ထောက်သမ္မတ ၊ ဆူခ်ခွတ်ထိုင်း ထာမ်မာထိရတ်ထ် တက္ကသိုလ် (Sukhothai Thammathirat University)
တော်ဝင်ထိုင်းအစိုးရပညာတော်သင်ကျောင်းသား ၊ အများပြည်သူဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုပေးကော်မရှင်ရုံး (OCSC)
အနောက်တောင်ဘက် ဥပဒေဆိုင်ရာဖောင်ဒေးရှင်း ၊ အမေရိကန်
ဥပဒေ နှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ဗစ်တိုးရီယား တက္ကသိုလ်/ CU ၊ ကနေဒါ/ ထိုင်းနိုင်ငံ
နိုင်ငံတကာဆိုင်ရာအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းခြင်း ၊ UNCTAD အဖွဲ့၊ ထိုင်းနိုင်ငံ
တွဲဖက်ပါမောက္ခ စူထာန်မ် ယွန်းအိုင်ထာန်မ် (Associate Prof. Sutham Yoonaitham) က ထိရောက်မှုရှိသော သတိမထားဘဲဖြစ်သွားခြင်း၏အခြေခံစည်းကမ်းချက်များကို အရေးစိုက်ထားသည်။ NTC အနေဖြင့် ရှင်းလင်း၊ တိကျပြီး ယုံကြည်မှုရှိသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ ဥပဒေအရကျင့်လုပ်ဆောင်သောအာဏာ နှင့် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ လွတ်လပ်မှုအပေါ်အခြေခံ၍ လုပ်ပိုင်ခွင့်လွှဲအပ်ထားသောသူများမှအုပ်ချုပ်သောအခါ စည်းကမ်းချက်များစက်ဝိုင်းကို ဆုံးဖြတ် ပေးရမည်ဖြစ်သည်။ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိသောလူများကလည်း နည်းလမ်းအမှန်ကို သူတို့၏အသိပညာဖြင့်အသုံးပြုသွားရမည် ဖြစ်သည်။ NTC အနေဖြင့်လည်း ထိုင်းနိုင်ငံ၌ လက်ရှိဈေးကွက်တည်ဆောက်ပုံမှာ အကြကီးမားဆုံး လက်ဝါးကြီးအုပ်ချုပ်မှုအဖြစ် တည်ရှိနေဆဲဖြစ်သောကြောင့် တွဲဖက်-စည်းမျဉ်းအယူအဆအပေါ် အခြေခံ၍ တယ်လီဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဥပဒေ B.E. ၂၅၄၄ (၂၀၀၁) ၏ အပိုင်း ၅၁ အရ လမ်းညွှန်ချက်များ နှင့် စည်းကမ်းချက်များကိုတည်ဆောက်သွားရမည်။ ၎င်းအယူအဆသည် စည်းမျဉ်းအပြောင်းအလဲများမှ ထိခိုက်မှုရှိနိုင်သည့် အစုရှယ်ယာဝင်များထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမပါရှိပဲ အာဏာလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံးခြင်းမှ လွတ်လပ်သောကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းများ အားကြိုတင်ကာကွာခြင်းအားဖြင့် စည်းမျဉ်းကိုအထူးပြုစေသည့်အပြင်၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသစ်များကို အလွယ်တကူ ဖန်တီး လာရာတွင် တရားမျှတသောယဉ်ပြိုင်မှုကို ရေရှည်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်း၏ကုန်ကျစာရိတ်များကို ရှော့ချခြင်း၊ နှင့် ပွင့်လင်း မြင်သာမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် စည်းကမ်းများထားရှိခြင်းတို့ဖြင့် အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်နိုင်ပါသည်။ NTC အနေဖြင့် မူရင်း စာရွက် စာတမ်းများအပါအဝင် အစည်းအဝေးအစီရင်ခံစာများနှင့်သတင်းအချက်လက်ထုတ်ဖော်ချက်များအပေါ် စည်းကမ်းများကို တည်ဆောက်သွားရမည်။ ၎င်း NTC မှ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများလိုအပ်သည့် အကြောင်းအရာ ၂၅ မျိုးကျော်ရှိသည့်အတိုင်း၊ ဤအယူအဆမှာ NTC အား တက္ကသိုလ်ပညာရေးအကြောင်းအရာများကိုထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်အတူ ဖော်ပြအမြင်များ နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်အမြင်များကို သိမြင်စေရန် ကော်မတီ၏အမှန်တရားများနှင့်အတူ စုပေါင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းမှတဆင့် အလွန် ဂရုစိုက်ပေးသွားရလိမ့်မည်။ အယူအဆ နှင့် ဥပဒေဆိုင်ရာအခြေခံသဘောတရားများအပေါ်အားထားမှုမှာ NTC ၏ စစ်ဆေး နှစ်ဖက်ညီမျှမှုကို ခွင့်ပြုပေးသွားမည့်အပြင်၊ အင်အားအများစုရှိလူသည့်အခါတွင် NTC အတွက် ၎င်း၏လုပ်ဆောင်မှုကို အမှန်ပြင်ရန်အတွက်လည်း ခွင့်ပြုပေးသွားမည်။ ဤအရာသည် စည်းမျဉ်းဘောင်၏အများယုံကြည်လက်ခံနိုင်မှုကို တိုးချဲ့ရန် အသုံးပြုနိုင်သည့် အယူအဆအသစ်တစ်ရပ်ပင် ဖြစ်ပါသည်။
တယ်လီဆက်သွယ်ရေးအပိုင်းအပေါ်ဥပဒေများအား အများပြည်သူဆိုင်ရာလက်ဝါးကြီးအုပ်ချုပ်မှုကို ဖျက်သိမ်းပြီး၊ နိုင်ငံသား များအား ညီမျှသောအကျိုးကျေးဇူးများဖြန့်ဝေမှုကို NTC ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သည့်လုပ်ဆောင်မှု အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည့် လူမှု- အသိုင်းအဝိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချိုးဖောက်၍မရသော NTC မှ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်မှုကိုအသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် စည်းမျဉ်းခွဲများကို မိတ်ဆက်ပေးခြင်းဖြင့် ယဉ်ပြိုင်မှုတစ်ခုကို အားပေးအထောက်အကူပြုခဲ့ပါသည်။
ဤလမ်းကြောင်းမှာ ဈေးကွက်ထဲဝင်ရန် သေးငယ်သောထောက်ပံ့သူများကိုခွင့်ပြုရာတွင် တည်ရှိနေသောကစားသူများ အကြား တရားမျှတသောယဉ်ပြိုင်မှုကိုအားပေးခြင်းထက် ထိုအသေးစားထောက်ပံ့သူများကို ပြောအားဆိုအားလျော့နည်းခြင်းနှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားခြင်းဖြင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတည်ဆောက်မှုတွင် အသစ် နှင့် တည်ရှိနေသောဝန်ဆောင်မှုထောက်ပံ့သူများ အားတရားမျှတစွာလိုက်နာလုပ်ဆောင်သွားရန် အာရုံစိုက်သွားပါမည်။ NTC အနေဖြင့် ဈေးကွက်အတွင်း အလားအလာရှိသော အရှုံးသမားများကို၊ အထူးသဖြင့် ကျေးလက်ဒေသများရှိ ဝင်ငွေနည်းသောလူများကို လွတ်လပ်သောဈေးကွက်အကျိုးကျေးဇူး များတွင် သေချာအောင်လုပ်ဆောင်သွားစေရန် ဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းများကို တည်ထောင်သွားသင့်ပါတယ်။
ဖနျတီးသူ - Supawan Sittipanya (02-07-2019 16:15:52)